Casio na-enye WSD-F20 na gam akporo Wear 2.0 nke ga-amalite na Eprel | Androidsis
Nke a bụ Casio smartwatch ọhụrụ nke na-eburu gam akporo Wear 2.0 ma bido na Eprel
Manuel Ramirez | | Noticias, smartwatch
Casio anyị webatara smartwatch mbụ ya n'afọ gara aga na WSD-F10, ma ugbu a ọ dị ka ọ na -akwado ịmalite ngwa ọhụrụ wearable nke bụ naanị mmelite maka ụdị ahụ, n'agbanyeghị na anyị nwere ike tinye ihe bụ GPS na gam akporo Wear 2.0.
Akpọọla ụdị ọhụrụ ahụ WSD-F20 ma na-ekerịta njirimara yiri ya dị ka onye bu ya ụzọ dịka bọtịnụ atọ dị n'akụkụ aka nri yana MIL-STD-801G asambodo maka nchebe megide oke ikuku, yana iguzogide ruo mita 50 dị omimi.
Nhazi nke smartwatch na -etinye anyị n'ihu onye na -eguzogide karịa nke gara aga. Casio agbakwunyere a nnukwu bezel gburugburu ihuenyo, nke nwere akara ederede maka bọtịnụ akụkụ yana nke na -egosipụta modulu GPS. Ị ga -enwe ike ịmalite ngwa ngwa ọkacha mmasị gị na bọtịnụ akụkụ, iji hapụ bọtịnụ ụlọ dị n'etiti.
Ihe ọzọ dị iche iche nke smart watch a bụ nke ya ọnọdụ ihuenyo abụọ, nke na -enye onye ọrụ ohere ịchekwa ndụ batrị site na ịgbalite ọnọdụ monochrome nke na -egosipụta naanị oge. Otu n'ime ihe ọhụrụ bụ ihe mmetụta GPS dị ala nke na-arụ ọrụ na atụmatụ maapụ iji mee ka nsuso ọnọdụ rụọ ọrụ ọbụlagodi mgbe ịnọghị n'ịntanetị. Maka emume a, Casio ga -ewepụta ngwa ga -enyere gị aka kaa akara na ọnọdụ na maapụ.
Enwetara data maapụ site na Mapbox, ị nwekwara ike budata maapụ maka ọrụ na -anọghị n'ịntanetị. Anyị ji ihu elekere abụọ na -ebuli GPS elu.
WSD-F20 ga-adị maka ịzụta site na Eprel 21 a pụkwara ịzụta ya na oroma na oji. Casio ekpughere ọnụ ahịa ya, mana ọ nwere ike ịdị n'otu ya na onye bu ya ụzọ $ 500. Ezigbo elekere nwere ike iburu ya ebe ọ bụla ịchọrọ na -enweghị nnukwu nchegbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Nke a bụ Casio smartwatch ọhụrụ nke na-eburu gam akporo Wear 2.0 ma bido na Eprel
Andres Barbarán dijo
Dị ka ọ bịara mgbe ha na -apụ apụ n'ụdị
Zaghachi Andrés Barbarán
Aristotle bụ nzọ Mattel na Google Home maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ahụ
You nwere ike ibi ndụ ụbọchị niile na-enweghị ekwentị gị?